Shariif Xasan ?Dowladdu sida ay rabto ayaa wanaagsan in lagu saleeyo shirka Baydhabo? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Shariif Xasan ?Dowladdu sida ay rabto ayaa wanaagsan in lagu saleeyo shirka Baydhabo? (Dhegeyso)
Diseembar 23, 2013 3:47 b 0
Baydhabo, December 23, 2013 – Xildhibaan Shariif Xasan sheikh Aadan oo ka mid ah baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay shirka wadatashiga ah ee ka socda Baydhabo, kaas oo lagu doonayo in maamul loogu sameeyo gobollada Baay iyo bakool iyo dhowr gobol oo kale.
Shariif Xasan sheikh iyo xildhibaano la mowqif ayaa dhowaan tegay Baydhabo ka hor inta uusan furmin wejiga ugu dambeeya ee shirka wada-tashiga, in kastoo ay soo bexeen warar sheegaya inay is khilaafeen labba garab oo xildhibaano ah oo ka soo jeeda gobolladaas isla markaasna shirka tegay.
Shariifka ayaa ka soo horjeeda qorshaha shirka ee ku wajahan in lix gobol loo sameeyo maamul gobolleedka dhismaha tashigiisu ka socdo Baydhabo, wuxuuna soo jeediyey in saddex gobol maamulka laga yagleelo.
?Lix gobol hadii maamul loo sameeyo waa wax wanaagsan, laakiin saddex horay baa loogu sameeyey waana la aqoonsaday caalamka, dadka Soomaaliyeed iyo dowladda intaba.? Ayuu yiri Shariif Xasan sheikh oo intaas ku daray ?Dowladda Soomaaliya sida ay qabto in wax loo sameeyo ayaa mudan.?
Shariif Xasan sheikh waxaa uu beeniyey inay Baydhabo kala soo noqdeen diidmo iyo in ay ka soo caroodeen shirka wada-tashiga ah, isagoo xusay in aysan waxba ka jirin warkaas ayna weli ku lug leeyihiin hanaanka shirka socda.
Dhegeyso: – Shariif xasan sheikh Aadan oo si faahfaahsan uga hadlay shirka wada-tashiga ee Baydhabo
Baahin: Isniin, 23 Dec 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Garowe
Gudoonka Bari oo dhigax dhigay laami cusub oo lagu tilmaamay mid muhiim u ah Boosaaso (Dhegeyso)